သစ်နက်ဆူး: ဖိုးလမင်းကြီးရေ...ထမင်းဆီဆမ်းရွှေလင်ဗန်းနဲ့ ပေးပါ (ပီတိ...၂)
ဒီလို စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေကြောင့် ဘာလုပ်လုပ် အောင်မြင်နေတာပဲ.. ကံ ကံ၏ အကျိုးကို ခံစားနေရတာပေါ့....
ထပ်တူ ပီတိစား ပီတိပွားမိပါတယ်...
ကိုသစ်ရေ့ ပီတိတွေကို ဝေမျှခံစား မုဒိတာ ပွားသွားပါတယ်ဗျာ...
ကိုဆူးအဖေက ဆုံးမတာ ပြင်းထန်တယ်နော်။ အခုလို စာရေးလိုက်တော့ ရင်ထဲပေါ့သွားပြီး ဒဏ်ရာတွေ သက်သာတာပေါ့။
အဲဒီနေ့က ကိုယ်မစားလိုက်ရပေမယ့် မြေးအဖွားတွေ ထမင်းမငတ်တာ ကြည်နူးမိပါတယ်။ ကောင်းမှု အမျှဝေငှလို့ သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ထမင်းငတ်ခံ၊ အရိုက်ခံပြီးရလာတဲ့ ပီတိလေး အဖိုးတန်ပါတယ်..။
ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီလိုအများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တာ ဖတ်ရလို. သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်မိပါတယ်
အစ်ကိုရေ အရိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ အစ်ကိုလည်း တူသောအကျိုးကိုတနေ့ခံစားရမှာပါ။ ဝေမျှခံစားသွားပါတယ်။
ကောင်း၏။ နာနာကြင်ကြင်နဲ့ ပီတိဖြစ်မိတယ်။
ပီတိတွေ မျှဝေ ခံစားသွားတယ်။ အကိုအရိုက်ခံ ခဲ့ရတာ စိတ်မကောင်းပေမယ့် မြေးအဖွားတွေ အတွက် ကြည်နူးပါတယ်.
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားသလို အသက်ငယ်ငယ် လေးနဲ့အလျှူဒါန ပြုခဲ့တာ ချီးကျူးပါတယ်ရှင့်